Su'aal Ilmaha oo Naaska la nuujiyo iyo Xaydka dumarka ?
Topic: Su'aal Ilmaha oo Naaska la nuujiyo iyo Xaydka dumarka ? (Read 769 times)
« on: July 10, 2012, 10:57:50 AM »
Asc wr wb dhamaan bahweynta somalidoc.com iyo shacabka soo booqda dhamaantiin Salaan kadib walaalayaal waxaan qabaa su'aal taasoo ah dumarku marka ay dhalaan/umulaan kadib hadii ay ilmaha naaska nuujiyaan oo aysan caanaha naaska maahane caano kale siinin habayn iyo maalinba ma cilad dhiiga caadada/xaydka ka joojiso mudo bilo ah ayaa ku dhacda ? Logged
Re: Su'aal Ilmaha oo Naaska la nuujiyo iyo Xaydka dumarka ?
« Reply #1 on: July 14, 2012, 09:44:06 AM »
CS waa lagaa qaaday..Hadii Hooyada Umusha ah ay ilmaheeda naas-nuujiso Sida la yaqaan ilaa muddo lix bilood ah kama yimaad dhiiga caadadu, 90% wax ka badana mudadaas lixda bilood ah uur ma qaadi karaan. Logged
« Reply #2 on: November 03, 2012, 06:13:16 PM »
Haweenka oo idil isku mid ma ahan waxaa jira haween iyagoo ilmaha nuujinaya caadada u timaado uurne qaadi karo.Haddii haweentu aysan helin caadadeeda inta ay naaska nuujinayso, uur ma qaado, laakiin haddii caadada ay timaado waxaa badan jaaniska ah in ay uur qaado.